चितवनमा तीन प्रकारका विद्युतीय गाडी भित्रिदै, बुकिङ खुल्ला - Narayanionline.com
रोकिएन कालीगण्डकी नदीको दोहनः सङ्कटमा शालिग्राम
पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएर फरार ट्रक चालक चितवन प्रहरीको फन्दामा
चितवन प्रहरीले फेला पारेका १०५ बटा मोबाइल सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रदान
मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिने
चितवनमा माइक्रोले कार र मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएपछि…
चितवनमा तीन प्रकारका विद्युतीय गाडी भित्रिदै, बुकिङ खुल्ला
चितवन, भदौ २८–
व्यावसायिक प्रायोजनका लागि चाहिने विद्युतीय सवारी साधन अब चितवनबाटै खरिद गर्न सकिने भएको छ ।
भरतपुर–१० एयरपोर्ट गेट अगाडि रहेको ग्रीन मोटर्स प्रा.लि.चितवनले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेका लागि बुकिङ खुल्ला गरेको छ । दिगो ग्रुप अफ कम्पनिजको नवलपरासी र चितवनका लागि आधिकारिक विक्रेता ग्रीन मोटर्सले विद्युतीय व्यावसायिक गाडी चितवनमा भित्र्याउँदै छ ।
दिगो ग्रुप अफ कम्पनिजले नेपालमा भित्र्याएको तीन प्रकारका दिगो ई–बस, दिगो ई ६–मिनी बस र दिगो डाँफे–माइक्रो बसलाई चितवनमा भित्र्याउन लागिएको ग्रीन मोटर्स प्रा.लि. चितवनका संचालक विशाल पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने–‘तीन वटै सवारी साधनका लागि बुकिङ खुल्ला गरि सकेका छौं, माग अनुसार हामी चितवमा भित्र्याउँछौं ।’ कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण ती गाडी चितवनमा ल्याउन ढिलाइ भएको बताए । उनले छिट्टै तीन प्रकारकै गाडी सार्वजनिक गर्नुको साथै शोरुम समुद्घाटन गरिने जानकारी दिए ।
दिगो ग्रुप अफ कम्पनिजले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको क्रमिक विकासलाई पुनः परिभाषित गर्दै विश्व विद्युतीय सवारी साधन दिवस (वल्र्ड इभी डे) को अवसर पारेर आफ्ना तीन वटा विद्युतीय गाडी सार्वजनिक गरेको थियो । सार्वजनिक गरिएका सवारी साधनमा दिगो ई–बस, दिगो ई ६–मिनी बस र दिगो डाँफे–माइक्रो बस हुन् । यी गाडीहरुको प्रारम्भिक मूल्य क्रमशः दिगो ई–बसको १ करोड २६ लाख ५० हजार, दिगो ई ६–मिनी बसको ९० लाख र दिगो डाँफे–माइक्रो बसको ४४ लाख रुपैयाँ पर्नेछ ।
कुन गाडीको कस्तो छ विशेषता ?
दिगो ई–बस प्रिमियम विद्युतीय बस हो । यसका विशेषतामा एबिएस, भेन्टिलेसन फ्यानसहितको रुफ ह्याच, स्टेर लाइट, प्रोटेक्सनबार, एलइडी रुट बोर्ड, रिमोट कन्ट्रोल डोर, डिजिटल घडी, एमपी ३ प्लस रेडियो, चार्जिबरिसेप्टेकल, एयर कन्डिसनर, हेडरेललगायत समावेश छन् । यो बसलाई ७० जनासम्म बोक्न मिल्ने बनाउन सकिन्छ ।
सुरक्षाको दृष्टिले यो बस आगो निभाउने फायर एक्सटिब्ग्विसर, सेफ्टी ह्याम्मर (चारवटा), पछिल्लो भागमा क्यामेरा, ढोकाको अनुगमन गर्ने प्रणाली जस्ता उपकरणले सुसज्जित छ । यसलाई सार्वजनिक यातायात, अर्बन फ्लिट, सहर भित्रको यात्रा, कर्मचारी परिवहन, एयरपोर्टसटललगायतमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
१२९ किलोवाट आवरको लिथिअम आइरनफस्फेट ब्याट्री र १४० किलोवाटको मोटर रहेको यो बस एकपटकको फुल चार्जले स्ट्यान्डर्ड अपरेसन कन्डिसनमा २०० किलो मिटरसम्म गुड्छ । यसको प्रतिकिलो मिटर बिजुली खर्च ७ रुपैयाँ १ पैसा पर्छ, जुन करिब २२ रुपैयाँ प्रति किलोमिटर पर्ने डिजेल बसको सञ्चालन खर्चको तुलनामा ७० प्रतिशत कम हो ।
२. दिगो ई ६ (मिनीबस):
प्राविधिक रुपमा उन्नत डिजाइनको दिगो ई ६ मिनीबस सुविधा र बसभित्र उपलब्ध हुने अन्य सम्पूर्ण व्यवहारिक विशेषताको मिश्रण हो । यसले २० जनासम्म यात्रुलाई प्रदूषण र आवाजरहित तथा आरामदायी यात्राको अनुभव दिलाउँछ । आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन यो एउटा उत्कृष्ट सवारी साधन हो । दिगो ई ६ सबै प्रकारका र दीर्घकालीन लचकता प्रदान गर्न र सहन विकास गरिएको सवारी साधन हो ।
यो उच्चतम सुविधा, लागत न्यूनीकरणरका र्बन निष्प्रभावी बनाउन पुनः परिभाषित बिलासी यात्रु बाहक सवारी साधन हो । पर्याप्त फराकिलो भित्री भाग, ठूला सिट तथा पस्न र निस्कन सजिला स्लाइडिङ डोर भएको यो बस निश्चित संख्यामा यात्रु ओसार्नका लागि उत्कृष्ट सवारी साधन हो । यो बसमा आवश्यकता अनुसार १४, १६, १७/२० जनासम्मको लागि व्यक्तिगत सिट भएको बनाउन मिल्छ । यसलाई सहर भित्रको वा एक सहरबाट अर्को सहरसम्मको यात्रा, कर्मचारी परिवहन, एयरपोर्ट सटल, टुरिस्ट पिक एण्ड ड्रप, स्कुल भ्यान तथा साइट सिइबभेहिकलको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
८० किलोवाट आवरको लिथिअम आइरन फस्फेट ब्याट्री र ११० किलोवाटको मोटर रहेको यो मिनी बस एकपटकको फुल चार्जले स्ट्यान्डर्ड अपरेसन कन्डिसनमा २१० किलोमिटरसम्म गुड्छ (एनइडिसी २८० किलोमिटर) । यो बसको प्रतिकिलो मिटर बिजुली खर्च ३ रुपैयाँ २ पैसा मात्र पर्न आउँछ, जुन डिजेलको करिब १३ रुपैयाँप्रति किलोमिटर खर्चको तुलनामा ७० प्रतिशत कम हो ।
३. दिगो डाँफे (माइक्रोबस):
११ सिटको दिगो डाँफे डिजाइन, सुविधा र विश्वसनीयताको प्रतीक हो । यो बलियो बहुउद्देश्यीय विद्युतीय माइक्रो बस यात्रालाई सजिलो र आरामदायी बनाउनुका साथै बढी भन्दा बढी आम्दानीका लागि प्राविधिक रुपमा उन्नत विशेषताले भरिपूर्ण छ । डाँफे फ्लिट सर्भिस, सहरभित्रको र एक सहरबाट अर्को सहरसम्मको यात्रा, कर्मचारी परिवहन, एयरपोर्ट सटल, टुरिस्ट पिकर ड्रप, स्कुल भ्यान तथा साइट सिइब भेहिकलको लागि उत्तम विकल्प हो ।
४२ किलोवाट आवरको लिथिअम आइरन फस्फेट ब्याट्री र ६० किलोवाटको मोटर रहेको यो सवारी साधन एकपटकको फुल चार्जले स्ट्यान्डर्ड अपरेसन कन्डिसनमा २५० किलोमिटरसम्म गुड्छ (एनइडिसी ३०० किलोमिटर) । यो माइक्रो बसको प्रति किलोमिटर बिजुली खर्च १ रुपैयाँ ६ पैसा पर्न आउँछ जुन डिजेलको करिब ९ रुपैयाँ प्रति किलोमिटर खर्चको तुलनामा ८० प्रतिशत कम हो ।
भरतपुरमा जेपी मोटर्सको ‘सुपर स्याटरडे’, गाडी किन्न विशेष अफर
नेपाली बजारमा भित्रियो कियाको ‘सोनेट’
कोरियन कार कियाको ‘सरप्राइज अफ द इयर’ सार्वजनिक
बजाजको चाडपर्व अफर–‘रोजेरै खुसी’
लकडाउनले गाडीको व्यापारमा ५० प्रतिशत कमी, वीरगंजमा रोकिए १५ सय कार
प्रधानमन्त्रीका पक्षमा ९२ सांसद छन्ः महेश बस्नेत
युवा संघ चितवनको जिल्ला भेला भोली, महेश बस्नेतले सम्बोधन गर्ने
अझै अन्धकारमा चितवनको पुरानो सदरमुकाम उपरदाङगढी
एनआईसी एशिया बैँकमा भाखा नाघेका कर्जा बुझाउन सहुलियत
बोनम्यारो पीडित बालकलाई आर्थिक सहयोग
टेकु अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीका लागि जागिर खुल्यो, पाँच दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने
टी-२० क्रिकेटको वरीयतामा नेपाल तीन स्थान तल झर्यो‍
एक सातापछि संचालनमा आयो भरतपुर कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला